तनहुँ जलविद्युत्को ‘डेढ वर्षभित्र सिभिल कन्ष्ट्रक्शन’ शुरू गरिने | गृहपृष्ठ
Home विकास तनहुँ जलविद्युत्को ‘डेढ वर्षभित्र सिभिल कन्ष्ट्रक्शन’ शुरू गरिने
on: March 21, 2013 विकास
तनहुँवासीले प्रतीक्षा गरिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू हुने भएको छ । विभिन्न दातृनिकायले ऋण सम्झौता गरेपछि आयोजना बन्ने आशा पलाएको हो । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना जिल्लाको काँहुशिवपुर र व्यास नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुँदै छ । सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको यस आयोजना निर्माण हुने खबरले जिल्लावासी खुशी देखिएका छन् । आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षबाटै विद्युत् गृहसम्म पुग्न आवश्यक बाटो तथा पुल निर्माण कार्य थालिसकेको छ ।
विद्युत्गृह रहने काहुँशिवपुर गाविस पुग्न सेती नदीमाथि पुल र आवश्यक बाटो निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण कार्य थालिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्देशक महेश आचार्यले जानकारी दिए । यसका लागि रू. १० करोडमा ठेक्का पाएको रसुवा कन्ष्ट्रक्शनले काम थालेको छ । आव २०७०÷०७१ भित्र सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको उनले बताए । यस्तै, बाँधस्थलसम्म पुग्ने बाटोको डिजाइनिङको काम पनि शुरू गरिएको छ । आगामी आवबाट बाटोको निर्माण पनि शुरू गरिने आचार्यले बताए । हालसम्म आयोजनाका लागि रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका एकबाहेक सबै दातृनिकायसँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाको सबै काम तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्तर्गत हुने बताइएको छ । अहिले आयोजना व्यवस्थापन पक्षले सम्झौता गर्न बाँकी रहेको आबुधाबी फण्डसँग कुराकानी गरिरहेको छ । साथै सिभिल कन्ष्ट्रक्शनको तयारीका लागि काम अघि बढाएको आयोजना निर्देशक आचार्यले बताए । सबै दाताको लगभग टुङ्गो लागिसकेकाले आयोजनाको स्थलगत निर्माण चाँडै शुरू गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकरी दिए । दातृनिकायले परामर्शदाता नियुक्त गरेर टेण्डर गरेपछि मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको रकम उपलब्ध गराउने भएकाले आफूहरूले अब त्यसका लागि तयारी थालेको उनको भनाइ छ ।
हाल आयोजना निर्माणपूर्वको तयारीको काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त रकमले पुल र बाटो निर्माणका साथै अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाले प्राथमिकता तोकेको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण चालू आवभित्रै सम्पन्न गरिने बताएको छ ।
प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रू. २१ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । चाँडै नै थप ८ करोड मुआब्जा वितरण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल रघुनाथ पौडेलले जानकारी दिए । आयोजनाले विद्युत् गृह, बाटो तथा बाँधस्थलमा पर्ने १ सय ४८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा चालू आवभित्रै तथा जलाशय क्षेत्रको मुआब्जा आगामी आवभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनास्थल पुग्ने पूर्वाधारको निर्माण सँगै परामर्शदाता र ठेकेदार नियुक्तिको काम अघि बढ्नेछ । डेढ वर्षभित्रमा सिभिल कन्ष्ट्रक्शन शुरू गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।